ओलीले फेरि किन भेटे राष्ट्रपति ? | Safal Khabar
ओलीले फेरि किन भेटे राष्ट्रपति ?
सत्ताबाट बाहिरिएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीसँग दुई पटक भेटवार्ता गरिसकेकी छिन्
विहीबार, ३१ भदौ २०७८, ०९ : ११
काठमाडौं । सामानयतयाः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई देशको समसामायिक घटनाक्रम लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीले नियमित विफ्रिङ गर्ने प्रक्रिया हुन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले भेटनै नहुने भन्ने हुँदैन । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले भेट गरेपछि त्यसको जानकारी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।
तर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सत्तावाट बाहिरिँदा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट वार्ता गर्न छोडेका छैनन । प्रधानमन्त्री ओली हुँदा राष्ट्रपति कार्यालय ओलीका लागि पानी पधेरो जस्तै थियो । भेटन जानका लागि कुनै समय सिमा थिएन ।
उनी आवश्यकता महसुस गर्दा कुदेर राष्ट्रपति कार्यालय पुगिहाल्थे । आफनो सहजताका लागि उनले राष्ट्रपति पदको समेत दुरुपयोग गर्ने गरी कतिपय विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसम्मलाई उपयोग गरे ।
जसकाकारण ओलीसँगसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि आलोचित भइन् । उनी एमाले त्यसमा पनि ओलीको अशली कारिन्दा मात्र भएको टिप्पणी पनि भयो ।
त्यही कारण अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि १४९ सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको निवेदनलाई नै उनले आधार देखाइनन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतकै फैसल्ला आवश्यक परयो ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको सपथ कार्यक्रममा पनि देउवालाई बधाई समेत नदिई हिडेकोमा राष्ट्रपति भण्डारीको निक्कै आलोचना भएको थियो । त्यसयता प्रधानमन्त्रीकै नियमित भेटघाट यदाकदा मात्र राष्ट्रपति सँग भईरहेको छ ।
तर सरकारबाट हटेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतमा झरिसकेका एमाले अध्यक्ष ओलीको भने राष्ट्रपतिसँग भेटघाट रोकिएको छैन । प्रधानमन्त्रीकोक कुर्सीवाट झरेपछि पनि देखिने र सुनिने गरी नै ओलीले दुई पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग वार्ता गरिसकेका छन् । त्यसैको पछिललो श्रृंखला हो वुधबार ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी वीचको भेटवार्ता ।
एमाले विभाजन पछि देशभर माधव नेपालको पार्टीलाई झिंगा, वडा सम्म कही नजित्ने र माधव नेपाल कमरेड सम्म होइनन भन्ने जस्ता भाषणवाजी गदै हिडेका ओली मंगलवार गृहजिल्ला झापामा थिए । वुधबार दिनभर उनी बुटवालमा एमालेले आयोजना गरेको कार्यक्रममा थिए ।
त्यसपछि उनी सिधै काठमाडौं आएर राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटवार्ता गर्न पुगेका हुन् ।
दिनभरको थकान समेत भुलेर उनले वुटवल बाट फर्केर साँझ राष्टपति भण्डारीलाई किन भेटन पुगे ? यसको बारेमा दुवै पक्षवाट केही खुलाईएको छैन ।
तर राष्ट्रपतिसँग ओलीले झण्डै दुई घण्टा लामो भेटवार्ता गरेको शित्तल निवास स्रोतले पुष्टि गरेको छ । साझ ८ वजे शित्तल निवास प्रवेश गरेका ओली वेलुकी १० बजेपछि मात्र शित्तल निवासवाट फर्किएका थिए ।